ဂဋ္ဌုန်ဦးစောနေရာမှာ သူ့ကို သ ရု ပ် ဆောင်စေချင်တယ်လို့ ပြောတဲ့သူကို ပညာသားပါပါ တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ ယုန်လေး – XB Media Myanmar
ဂဋ္ဌုန်ဦးစောနေရာမှာ သူ့ကို သ ရု ပ် ဆောင်စေချင်တယ်လို့ ပြောတဲ့သူကို ပညာသားပါပါ တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ ယုန်လေး
အဆိုပိုင်းနဲ့ သရုပ်ဆောင်အလုပ်တွေသာမကပဲ အခုဆိုရင် ဒါရိုက်တာတစ်ဦးအနေနဲ့ပါ ဇာတ်ကားတွေရိုက်ကူးနေပြီဖြစ်တဲ့ ယုန်လေးကတော့ စကားပြောရင် အရမ်းကို ပွင့်လင်းသူ တစ်ဦးပါ။ လတ်တလောမှာတော့ ယုန်လေးက ဂဋ္ဌုန်ဦးစောနေရာမှာ ယုန်လေးကို သရုပ်ဆောင်စေချင်တယ်လို့ ပြောတဲ့သူကို ပညာသားပါပါ တုံ့ပြန်လိုက်တာ တွေ့ရပါတယ်။ တစ်ခုခုဆို သေချာတွေးပြီး လေးလေးနက်နက် ပြန်ပြောတတ်တဲ့ ယုန်လေးကတော့ တကယ့်ကို လေးစားစရာ ကောင်းပါတယ်နော်။
မိုမိုလေးချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ဂဋ္ဌုန်ဦးစောနေရာမှာ ယုန်လေးကို သရုပ်ဆောင်စေချင်တယ်လို့ ပြောတဲ့သူကို ပညာသားပါပါ တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ ယုန်လေးရဲ့အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ယုနျလေးကတော့ “တဈမနကျလုံး Cb မှာဒါတှပေဲ လာလာပို့နကေလြို့ ရီစရာ အနနေဲ့ကွညျ့ ရငျ ရီစရာပါ။ ဒါကို အတှေးတဈခုဝငျလာတယျ ။ဗိုလျခြူပျရော . ဦးစော ရောလူတောျတှေ ကွီးပဲလို့ကွားဖူးတယျ ။နှဈယောကျလုံး တိုငျပွညျအတှကျ အခုထိရှိနရေငျ ဘယျလောကျေ ကာငျးမလဲဗြာ . အခုလဲ မညီညှတျပွနျပါဘူး . မှားရငျမှားတယျ . မှနျရငျမှနျတယျ . ဒဲ့ပွော . ကိုယျအဖှဲ့စညျးထဲကမို့လို့ ဖုံးပေး ပိုဆိုးတာပေါ့ . နှဈဖကျလုံးက လောျဘီဆိုတာတှကေလညျး 😭😭😭ဒီ အတိုငျးသှား ကြှနျတောျတို့တှေ ထပျရူးဦးမှာ အဓိက က စညျးလုံးရမှာ .ပွောငျးလွဲ ပီးသှားပွီ ကောငျးလာတာတှရေောပိုဆိုးသှားတာတှရေော .အဖှဲ့အစညျး တဈခုမှာတော့ .အကုနျလုံးကောငျးတာလညျး မရှိဘူး ။ အကုနျလုံး ဆိုးတာလညျး မရှိဘူး ။အမှိူကျတှကေို ငါသူကို နရောပေးတာမှာတာပဲ ဝိုငျးအပွောခံရမှာကွောကျပွီး ဖုံးဖိဆကျထားတော့ ပိုဆိုး တာေ ပါ့ .
ကိစ္စတိုင်းကြည့်လိုက်ပါ အမှန်တရားတွေကို ဖုံးထားတဲ့ ကိစ္စတိုင်း ကြာစင်ပို ဆိုးသွားတာ ကြီးပဲ ။ ဦးမဆောင်နိုင်တဲ့ လူကို ဦးဆောင်နိုင်တဲ့နေစည မပေးတာ အကောင်းဆုံးပါ ။အသေးစား လုပ်ငန်းလေးတွေ မှာ လူဆယ်ဂဏန်းလောက်တောင် မအုပ်ချူပ်ဖူးတဲ့ လူတွေကို မြှောက်စားမယ်ဆိုရင် 😭😭😭အားလုံး အမြန်စည်းလုံးပြီးအရည်အချင်း ရှိတဲ့လူများနဲ့ဦးဆောင်နိုင်ပြီး ပြန်လည် ဦးမော့နိုင်ပါစေ။ဆဲလည်း မတတ်နိုင်ဘူး .၂၀၁၅ က ရွှေဈေး . ဒေါ်လာဈေး .ကား. ဖုန်း . လူနေမူ့ အတော် အဆင်ပြေခဲ့တာ ။၂၀၂၀ မှာ အားလုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ ။ ကြိုက်တဲ့လူတက် အရေးကြီးတာအားလုံးအဆင်ပြေဖို့ပါ။” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့အမြင်ကို ပြောထားတာပါ။
ယုန်လေးကတော့ မဟုတ်မခံ စိတ်ဓာတ်ရှိသလို အဆဲခံရလည်း အမှန်တရားကို ပြောရဲသူတစ်ဦးပါ။ မိုမိုလေးချစ်ပရိသတ်တွေလည်း အရမ်းကို ထိမိလွန်းတဲ့ ယုန်လေးပြောတာတွေကို သဘောကျရင် share သွားလိုက်ကြပါဦးနော်။
Source:Yone Lay’s Facebook, Ref&Credit:momolay.com
ဖြိုးမြတ်အောင် ရဲ့ ပထမဆုံး ထွက်ရှိတဲ့ သင့်အတွက်မနက်ဖြန် Album နာရီပိုင်းအတွင်းကုန်သွား
90s Born တွေရဲ့ ငယ်ဘဝကိုလှပေ စခဲ့ဖူးတဲ့ Mr.Bean မင်းသားကြီးရဲ့ လက်ရှိပုံရိပ်